ProtonVPN, waa ikhtiyaar aad u fiican in VPN lagu isticmaalo Linux | Laga soo bilaabo Linux
ProtonVPN waa a adeeg bixiyaha shabakad gaar loo leeyahay (VPN) oo ay maamusho shirkadda Switzerland ee Proton Technologies AG, oo ah shirkadda ka dambeysa adeegga emaylka ee ProtonMail. ProtonVPN wuxuu adeegsadaa OpenVPN (UDP / TCP) iyo borotokoolka IKEv2, oo leh sirta AES-256.
Shirkaddu waxay leedahay siyaasad adag oo aan diiwaangalinayn ee ku saabsan macluumaadka isku xirka isticmaalaha waxayna sidoo kale ka hortageysaa xogaha DNS iyo Web-RTC inay soo bandhigaan cinwaanada IP-ga ee dhabta ah. ProtonVPN sidoo kale waxaa ku jira taageerada marin u helida Tor iyo beddelka dilka si loo xiro marinka internetka haddii uu dhaco xiriir VPN ah.
1 Ku saabsan ProtonVPN
1.1 Xisaab hel
1.2 Sidee loo rakibaa macmiilka ProtonVPN ee Linux?
Ku saabsan ProtonVPN
Proton Technologies waxaa aasaasay dhowr cilmi baarayaal CERN ah (Ururka Yurub ee Cilmi-baarista Nukliyeerka) wuxuuna ka diiwaangashan yahay Switzerland, oo leh sharci adag oo ku saabsan ilaalinta asturnaanta, taas oo aan u oggolaanayn hay'adaha sirdoonka inay xakameeyaan macluumaadka.
ProtonVPN waxay bixisaa heer sare oo difaac ah kanaalka isgaarsiinta adoo adeegsanaya AES-256, is weydaarsiga furaha wuxuu ku saleysan yahay furayaasha RSA 2048-bit iyo HMAC, SHA-256 waxaa loo adeegsadaa xaqiijinta, waxaa jira difaac ka dhan ah weerarada ku saleysan isku xirnaanta xogta durdurinta), wuu diiday inuu xafido diiwaanka oo aan diiradda saareynin macaash doon, laakiin kordhinta amniga iyo asturnaanta bogga (Mashruucan waxaa maalgaliyay sanduuqa FONGIT, oo ay taageerto Komishanka Yurub).
Inaad adeegsan karto Proton VPN, Waa muhiim in la sheego taas wuxuu leeyahay adeeg bilaash ah kaas oo ku xaddidan astaamo kala duwan iyo in si loo helo kuwan waa inaad gashid koonto lacag bixinaysa oo ku dareysa astaamo kolba qiimaha qorshuhu kordhayo.
Sidoo kale, waa muhiim in la ogaado taas Waa inaan abuurnaa koonto si aan ugu adeegsano adeegga nidaamka.
Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee ay adeegsadaan adeegga, waxaa la siin doonaa a 7-maalin tijaabo bilaash ah oo ku saabsan ProtonVPN kaas oo aad ku heli karto marinka astaamaha qorshahaaga Plus inta lagu jiro toddobada maalmood ee ugu horreeya ee rukunkaaga bilaashka ah.
Tan waxaa ka mid ah marin u helka in ka badan 380 server oo ka kala socda 32 dal, daboolida ilaa 5 aaladood hal liisanka, P2P togag, iyo Tor server u heellan.
Tan awgeed, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa nagu toosin Bogga ProtonVPN oo guji 'Hel ProtonVPN lacag la'aan'.
Marka tan la sameeyo, qorsheyaal xul ah ayaa soo muuqan doona oo waxaan gujin doonnaa 'Bilaash' oo halkan markii la codsado, geli emaylkaaga oo guji 'Hel ProtonVPN bilaash'.
Hadda, waa inay kaliya eegaan e-maylkooda si ay u arkaan Koodhkooda Xaqiijinta oo ay tahay inay ku qoraan sanduuqa 'Verification Code' oo guji 'Xaqiiji'.
Iyadoo tan, waxaan dooneynaa inaan abuurno koontadeena waxaanan dooneynaa inaan dhameystirno macluumaadka la codsaday. Tan waxaan awoodi doonaa inaan kala soo baxno macaamiisha ProtonVPN si ay ugu awoodaan inay u adeegsadaan nidaamkayaga.
Sidee loo rakibaa macmiilka ProtonVPN ee Linux?
Tan waxaan u furaynaa terminal iyo waxaan fulineynaa amarrada soo socda, sida ku cad qeybinta aan isticmaaleyno.
Hadday yihiin isticmaaleyaasha Arch Linux, Manjaro, Arco Linux ama qeybinta kale oo ka soo baxda Arch Linux, aan qorno:
Hada markay yihiin kuwa adeegsada nooc kasta oo OpenSUSE ah, waxaan ku qori doonnaa waxyaabaha soo socda galka:
Kuwa adeegsada Fedora, CentOS, RHEL ama deriska:
Marka laga hadlayo Debian, Ubuntu, Linux Mint iyo waxyaabo kale oo la mid ah:
Finalmente si aan u adeegsanno macmiilkan ayaan qoreynaa terminal amarka soo socda:
Y waxaan u soconaa inaan ku xirno server iyadoo amarka:
Kuwa doonaya inay wax badan ka ogaadaan isticmaalka macaamiisha ProtonVPN, waxay kula tashan karaan dukumiintiyadeeda boggeeda internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » ProtonVPN, waa ikhtiyaar aad u fiican in VPN lagu isticmaalo Linux
FSF waxay soo bandhigtay codsi loogu talagalay Microsoft si loo furo lambarka Windows 7